Kooxdee ayuu taageeri doonaa caawa Tababare Mauricio Pochettino final-ka Champions League… (Real Madrid mise Liverpool?) – Gool FM
Haaruun May 28, 2022
(Paris) 28 Maajo 2022. Macalinka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino ayaa shaaca ka qaaday kooxda uu taageerayo Final-ka Champions League.
Tababaraha PSG ee Mauricio Pochettino ayaa taageeri doona caawa kooxdii reebtay Naadiga ee Real Madrid, waxaana uu xaadiri doonaa garoonka Stade de France ee caawa lagu soo gabagabaynayo kama dambeysta Koobka Horyaallada Yurub.
Wareeggii 16-ka Champions League ayay ku hartay kooxda Macallin Mauricio Pochettino, iyadoo sababsatay naadiga Real Madrid oo guul soo laabasho ah lugtii labaad kaga qaadatay Santiago Bernabeu.
Kaddib markii la weydiiyey kooxda uu doonayo inay ku guuleysato Champions League ee uu caawa taageeraha u yahay Macallin Pochettino waxa uu yiri: “Waa ay iska caddahay in qalbigeygu aad u doonayo caddaanka, marka loo eego guduudka.
“Waxaan Jacaylka aan u qabo Real Madrid bilaabay sanadkii 1994-kii oo ahayd markii aan imid Barcelona, waxaan nasiib ku lahaa inuu Macallinkeyga noqday Jose Antonio Camacho oo uu igu beeray Jacaylka kooxda Real Madrid.
“Waligay ma awoodin ciyaaryahan ahaan iyo tababare ahaanba in aan noqdo Real Madrid, laakiin dareenkaygu waa uu cad yahay, iyaga ayaanan taageerayaa.” ayuu hadalkiisa ku daray Macallinka PSG.
WAR CUSUB: Kooxda Manchester United oo indhaha ku heysa inay la soo wareegto N'Golo Kante